कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउन निजी क्षेत्रलाई वैधानिकता, होला त सार्थकता ? यस्ता छन् तलब सुविधा (भिडियो हेर्नुहोस) - Nepali in Australia
June 27, 2021 autherLeaveaComment on कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउन निजी क्षेत्रलाई वैधानिकता, होला त सार्थकता ? यस्ता छन् तलब सुविधा (भिडियो हेर्नुहोस)
निजी क्षेत्रमार्फत् अब वैधानिक रूपमै नेपालीहरू कतार प्रहरीमा भर्ना हुन जान पाउने भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार कतार नेपाली श्रमिकहरूको सबैभन्दा रोजाइमा पर्ने मुलुकमध्ये एकमा पर्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ।
तर पहिले आफ्नो प्रहरीमा नेपाली नागरिक लिन इच्छुक कतारको “पछिल्लो मनस्थिति” के छ भन्ने थाहा नभएकाले त्यसबारे अन्योल कायमै रहेको नेपाली अधिकारीको भनाइ छ।
केही महिनाअघि कतारले करिब १० हजार नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रहरीमा भर्ना गर्न चाहेको विवरणका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। यद्यपि नेपालमा कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले स्वीकृति नलिइकन “आफूखुसी रकम उठाएर”
बदमासी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले केही म्यानपावर कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेको थियो। उसले गत चैतमा सूचना नै प्रकाशित गरेर कतार प्रहरीमा भर्ना गरिदिने बहानामा ठगी हुनसक्ने भन्दै सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरेको थियो।